UFransman weTS Galaxy unethemba lokushintsha izinto kweyeligi - Impempe
UFransman weTS Galaxy unethemba lokushintsha izinto kweyeligi
January 4, 2021 Impempe.com
UBevan Fransman, weTS Galaxy, uthi akajabulile neze ngendlela abenze ngayo emidlalweni edlule yeDStv Prmiership.
IGalaxy izithola isendaweni ka-12 kwi-log yePremiership ngemuva kwemidlalo eyisishiyagalombili. Isakwaze ukuwina umdlalo owodwa, yadlala emine ngokulingana, yase ishaywa kwemithathu. Isashaye amagoli amahlanu emidlalweni yeligi.
Konke lokhu kwenze ukuthi kuxoshwe obengumqeqeshi uDan Malesela oseqeqesha iChippa United. IGalaxy izobhekana neBaroka FC koweDStv Premiership eMbombela Stadium, ngoLwesibili, ngo-5 ntambama.
“Silindele imidlalo enzima ezayo, mkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze sizikhiphe enkingeni esizifake kuyona. Asiqedanga kahle ngonyaka odlule uma ubheka imiphumela emithathu yokugcina. Nokho leyo midlalo seyidlulile futhi ngeke sisenza lutho ngayo,” kusho uFransman owake wayibamba kwiKaizer Chiefs neMaritzburg United.
“Kumele sakhe kabusha, sibeke imiqondo emidlalweni ezayo, siphinde sibumbane futhi.”
Uthe kumele baqine ngokomqondo njengoba beya emdlalweni wabo olandelayo neBaroka.
“Wonke umuntu ungumqemane, sonke singadlala kodwa kubalulekile ukuthi siqine nangokomqondo. Ngicabanga ukuthi lokho kuzoba yinto ebalulekile kithina ukuya phambili. Amaholide ngicabanga ukuthi abasizile abadlali ukuthi baye emakhaya babuye imiqondo isithe ukuhluzeka.
“Nemizimba ithole ithuba lokuphumula. Asibanga nesikhathi sokuphumula esikahle ngesikhathi kuvalwe isizini ngakho kube yinto enhle ukuphumula kancane. Ngithemba ukuthi sizoqala ngeBaroka sithole imiphumela emihle, bese sakhela kulokho,” kusho uFransman.
Emdlalweni wokugcina wePremiership iGalaxy ishaywe yiCape Town City ngo 3-2 ngoDisemba 19. Njengamanje iGalaxy iqeqeshwa wuqweqwe lomqeqeshi uZipho Dlangalala.
Previous Previous post: UMphahlele uqiniswa idolo ukubuya komgadli weChiefs
Next Next post: UMbazo uqashwe njengephini lomqeqeshi weCape Town City